Hevitra MPANOHARIANA | Martsa 2020 |
2020-03-31 @ 13:11 in Ankapobeny
Ary tonga ny taonjato vaovao, izay nanadinoana ny tantara teo aloha, nisy mpanjaka vaovao nanjaka tao Ejipta. Ary izy niteny tamin'ny mpanolo-tsainany hoe: Indro fa mihabetsaka sy mihalava ny fotoana iainan'ny zokiolona eto ambonin'ny tany nefa andaniambola betsaka ny vola famelomana azy ireo; andeha anaovantsika hevitra ireo fa manimba ny toekarem-pirenentsika. Nanaiky izany hevitra izany ireo mpanolo-tsaina satria heveriny ho andriamanitra velona miahy ny vahoakany ny mpanjaka.
Dia nanakarama manampahaizana izay sakaizany ihany ny mpanjaka hamorona aretina handripahana ireo zokiolona ireo. Dia nihevitra lalina ireo manampahaizana ireo ny amin'izay fomba hanavahana ny zokiolona amin'ireo sokajin-taona hafa ka na tratran'ilay aretina aza ny zaza sy ny tanora dia ho sitrana ihany, fa tsy mamela mivalo kosa amin'ny olon-dehibe mareforefo ara-pahasalamana sy efa nahazo taona mbamin'ny zokiolona fa dia ataony matiny tokoa.
Nomena baiko koa anefa ireo manampahaizana ireo hanome ny fanefitra ilay aretina hitsaboana ny havan'ny mpanjaka sy ny namany akaiky mety ho tratrany. Nofemperana mafy ireo manampahaizana ireo hitazona izany rehetra izany ho tsiambaratelo satria famonoana mangingina toy ny fahafatesana voajanahary no hambara amin'ny vahoaka.
Kanjo, nisy dokotera iray nahatsikaritra fa tsy mahazatra ity aretina iray toa mamono olona betsaka ity. Tsy maintsy natao izay hamonoana azy dia lazaina fa matin'ilay aretina vaovao tsikariny ihany izy na dia mbola ao anatin'ny heriny tanteraka aza. Dia nanao ny asa nampanaovina azy tokoa ilay aretina ka maro ireo zokiolona no matiny.
Gaga tamin'ny herin'ilay aretina ny vahoaka ary nieritreritra fa matoa navelan'Andriamanitra hiseho izany dia ho famaizana ny vahoaka amin'ireo fahotana nataony, saingy tsy noheveriny manko fa ny mpanjakany ihany no tomponkevitra amin'ity aretina ity. Dia anjaranao indray no manohy ity anganongano ity...
2020-03-31 @ 01:49 in Ankapobeny
Tsy azo tohizana intsony io fihibohana io satria tsy maintsy manana adidy ny fanjakana hizara sakafo maimaimpoana isan'andro ho an'ny isa-tokantrano. Tsy misy anefa ny vola ahafahana manatanteraka izany adidiny izany. Mijaly ny vahoaka manontolo (eto Afrika) satria tsy afa-mivelona araka ny tokony ho izy. Vao maika famonoana vahoaka ny fampihibohana azy fa aiza ny vola hahavitana izany. Aretina nentin'ny mpanankarena teto an-tanindrazana ny covid-19 nefa ny mpanankarena ihany no afa-mizaka tsy misy fanampiana ny fihibohana. Dia lasa ireo sahirana ara-pivelomana indray ny lasibatra sy avela hihanjahanja amin'ny safidin'ny ho fatin'aretina sa ho fatin'ny hanoanana? Tsy misy anefa ny hisafidy ny ho fatin'ny hanoanana raha mbola misaina ihany koa ny olombelona ary tena avela hisafidy tokoa.
Raiso fotsiny eo amin'ny fitaterana, nahoana no raràna ny fitaterana olona an-tanety eto an-tanindrazana nefa maninona aho no mahita ny "Tsaradia" midina sy miakatra hatrany ao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato? Satria ve tsara fepetram-piarovana ara-pahasalamana kokoa ny voromby nefa mifanizina kokoa ny anaty fiara? Tsy izay anefa no hitako fa hoe ny voromby fitaovam-pitaterana mahazatra ny mpanankarena fa ny fiarakodia kosa no iononan'ny tsy mahazaka ny saran'ny fandehanana fiaramanidina izay anisan'ny lafo indrindra eto ambonin'ny tany ny eto Madagasikara. Tahaka ny mametraka ihany koa hoe manan-jò ny mpanankarena hamindra aretina any amin'ny faritra hafa fa tsy voafehy kosa ny aretina raha ny sahirana no mitondra azy amin'ny faritra niaviany.
Misy zavatra tsy mitombina ihany koa eo amin'ny fandraisana andraikitra. Asaina mihiboka ny olona nefa maninona no mamory vondron'olona sasantsasany hatrany mizarazara fanampiana? Nahoana no misy avahana omena ary misy ny tsy omena na dia eo amin'ny samy sahirana aza? Ary ireo olona maka ny fanampiana ireo ve moa izany efa heverina avy hatrany fa tsy mitondra ilay aretina? Tsy misy dikany ilay fihibohana raha misy olona tsy maintsy mivoaka hatrany, na hiantsena io na hiasa (tsy miankina) izany hoe tsy misy ifandraisany amin'ilay ady amin'ny viriosy. Azo heverina avy hatrany manko iny fa hitondra ilay aretina ao an-tokantrano misy azy, indrindra moa fa olombelona ihany ka mety hanadino ny arofenitra tokony hotanterahana ao anatin'izao ady amin'ny areti-mandringana izao.
Ny manahirana anefa dia ailika any amin'ireo olona tsy manaiky fa mivoaka hatrany ny rihitra amin'ny tsy fahombiazan'ny fihibohana. Ireo mivoaka hatrany no helohina sy omena tsiny ho mafiloha. Fa odiana tsy jerena ny hoe ny olona tsy maintsy mitady ny hohanina anio. Koa aty amin'ny firenena mpitady ny hohanina isan'andro, dia tsy mitovy amin'i Eoropa sy Amerika isika, tsy ananan'ny olona izany tahiry izany ka raha mandidy ny fanjakana ny haniboka dia anjarany izany no manome sakafo ireo olona nodidiana hihiboka, raha tsy hoe angaha terena ankolaka hangalatra sy handroba ny olona noana raha mbola hohitarina io fepetram-panibohana io...
Ary aoka tsy hohadinoin'ny tsy voatery hiantsena intsony fa efa fehezin'ny varomaizina ny siramamy sy ny menaka ary ny vary ka araka izay tiany hanaovana ny vidiny no mitranga amin'izao fotoana izao. Tsy ny nanangona sy nanapitra ny entana tamin'ny andro voalohany nametrahana ny hamehana no iharan'izany fa ireo voatery mandeha an-tongotra lavitra hiantsena dia milahatra avy eo rehefa mividy entana eny amin'ny mpamongady... Tsy voatery ho ny tsenamora intsony no misy filaharana lava fa any amin'ireo mpamongady sisa mbola misokatra ihany koa. Fa raha ny aty aminay aloha tsy hahita ireo zavatra ilaina andavanandro telo ireo ianao fa ho gaga fotsiny mahita olona mitaona siramamy amin'ny gony nefa tsy hitanao izay mpivarotra izany.
Fanamarihana: Indroa ihany aho raha be no nanaraka ny kabarin'ny Filoha nandritra ity trangan-javatra ity...
2020-03-24 @ 23:48 in Ankapobeny
Handefa tsikelikely ny diarin'ny fiatrehan'ny olona ny fielezan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Rehefa vita ny kabary nilazan'ny filoha ny fisian'ny tranga Covid-19 voalohany teto an-tanindrazana dia nikoropaka ny olona, indrindra ireo manambola afa-manao tahirin-tsakafo sy kojakoja ilaina andavanandro.
Asabotsy 21 marsa 2020:
1- Hita tamin'ny tambajotra sosialy ny filaharana teny amin'ny farmasia, amin'ny alina sy amin'ny atoandro mazava loatra. Ifandrombahana ireo fanafody heverina ho manasitrana ny aretina sy ny mpitazona hery fiarovana. Vetivety dia lany ny Paracetamol sy ny Vitamine C tamin'ireo farmasia nisokatra. Ary nilaharana hatrany ireo farmasia mandraka ity andro nanoratana ity raha mbola misokatra ry zareo ka manana izay tadiavin'ny olona izay. Mariho fa ny zoma alina taorian'ny kabary no efa nivoahan'ny olona hividy fanafody.
2- Rehefa nivoaka ny trano ny manan-katao dia ny namonjy toeram-pivarotan-tsolika no nataony manaraka. Tsy nisy ny famerana dieny ety am-boalohany ka dia samy nameno araka ny takatry ny volany ireo izay afa-nanao izany. Tamin'io no nahitako fa kely ny fatra zakan'ny scooters. Nameno araka izay tratra ireo taxi hitako raha mampiditra tsikelikely no nahazatra azy ireo. Efa miomana sahady ny hisian'ny krizy mafimafy kokoa.
3- Nilaharana ihany koa ny teny amin'ny banky sy ny milina fisintonam-bola (ATM-GAB) hividianana "provision" mazava loatra. Nilaza ny mpilahatra iray teo fa ny alina dia efa nisy nipetrapetraka teo amin'ny manodidina ny banky, niandry vola ho tonga satria lany ny vola navoakan'ny GAB-ATM. Tsy nahagaga raha lava tsy tahaka ny mahazatra ihany koa ny filaharana tamin'ity fotoana ity.
4- Nifandrombahana sy nilaharana aoka izany ny teny amin'ny mpamongady. Vetivety dia tsy hita nanjavonana ny entana rehetra tao aminy. Ny vary no tsy hita voalohany. Mariho fa efa herinandro talohan'izao no efa tsy hita ny vary gasy sy ny mangamila (vary mena rehetra) ary tapabolana lasa kosa izay no tsy nivarotra vary gasy amin'ny gony intsony ireo mpamongady tao Sabotsy-Namehana ireo fa ny stock sisa no mameno tanàna. Amin'izao kosa dia ny vary rehetra mihitsy no tsy hita nanjavonana. Diso hevitra hatrany ireo nieritreritra toa anay fa talata ihany dia hiverina amin'ny laoniny io famatsiana vary io, eto am-panoratana aho vao mihevitra fa matoa efa tsy nisy mialoha ny vary gasy dia efa nisy goavana any ho any nanangona ny vary hakany tombombarotra mihoa-pampana.
5- Tamin'ity fotoana ity no nalaza dia nalaza ny fiakaran'ny vidin'ny voasary makirana izay nitombo avy folo heny. Raha ariary zato manko ny vidin'ny iray ny maraina dia nahatratra arivo ariary izany mandra-pahatapitra tanteraka izany voasary mahakirana izany.
Nifanindran-dalana tamin'izany dia nifampihaona amin'izay tokony hatao ny Filoham-pirenena sy ny Filoha tsirairay avy amin'ny mpikambana ao amin'ny FFKM. Tsy hay izay fehinkevitry ny fihaonana fa ny tsikaritra dia nanao fanambarana tsirairay ireo Fiangonana efatra mpikamban'ny FFKM ireo. Ny an'ny FJKM sy ny FLM tamin'ny alalan'ny Filohany ary ny EKAR kosa tamin'ny alalan'ny Filankevitra Ekiomenika (Fivondronamben'ny eveka) eto Madagasikara. Ny itovizan'ny fanambarana dia ny fikatonan'ny Fiangonana amin'ny alahady 22 marsa 2020 sy ny fanafoanana ireo fivoriana rehetra miankina amin'ny fiangonana ao anatin'ny tapa-bolana. Nisy Fiangonana Zandriny mbola nikiry ny hanohy ny fotoanany, na ny asabotsy io na ny alahady, fa noravan'ny mpitandro ny filaminana izany ary nasainy namonjy fodiana ny mpiangona.
Alahady 22 marsa 2020:
Sambany tsy nisy fotoam-pivavahana ny fiangonana maro teto Madagasikara, ho fitsinjovana ny tsy isian'ny fielezan'ny aretina mazava loatra. An-tserasera kosa ny ankamaroan'ny fotoana raha toa tsy naharaka izay tamin'ny haino aman-jery tsy miankina ny olona. Nanao izay ho afany ireo mpitari-pivavahana manan-katao ny fiangonana ao amin'ny tamin'ny fanatontosana ny fotoana tamin'ny alalan'ny lahatsary mivantana, ary lohalaharana tamin'izany ny tamin'ny tambajotran-tserasera Facebook Live. Nisy aza moa ny niteny fa nanjary naharaka fotoana dimy aman'enina tao anatin'ny alahady iray. Tamin'ny marainan'ity Alahady ity no nanomboka tsy re intsony ny Radio Fahazavana 88.6 (Radion'ny FJKM) fa notazonin-dry zareo ho tsiambaratelo ny anton'izany tsy fandrenesana azy intsony izany.
Mariho fa misy ny vondrona manokana miady amin'ny fampiakaram-bidin'entana tsy ara-drariny ary misy ny antso manokana azo anaovana fitorohana saingy toa tsy hita ny fahombiazany amin'izao krizy izao hatramin'ny fotoana nanoratana. Misy ihany koa ny fanaovana antso maimaimpoana amin'ireo manahy fandrao tratran'ny aretina (910 na 913) saingy be dia be ny olona mitaraina fa toa tsy mandray antso akory ireo laharana maitso natao hiantsoana maimaipoana ireo, feonkira fotsiny no mamaly.
Nihazakazaka namonjy fodiana ireo olona avy any amin'ny faritany. Feno olona ny toeram-piantsonana.
Tamin'ny fotoanan'ny misandratrandro dia nilaza ny blaogy iray fa efa betsaka no tratran'ny coronavirus (70-200), notsipahan'ny fitondrana ho lainga izany. Nilaza ihany koa io blaogy actutana io fa hanao fanambarana ny filoham-pirenena amin'ny fito ora hariva, naverimberin'ny TVM fa tsy misy izany fanambaràna ho ataon'ny filoham-pirenena izany fa ny filazana izay ataon-dry zareo ihany no ofisialy sy marina. Ny folakandro dia tsy azo nidirana avy eto Madagasikara intsony ny blaogy actutana.
Rehefa nipaika anefa ny amin'ny fito ora mihoatra dia nandefa filazana antsoratra mikorisa eo ambany indray ny TVM fa hanao fanambaràna ny Filohampirenena amin'ny valo ora, nihemotra ho amin'ny sivy ora alina izany fa mbola eo am-pivoriana miaraka amin'ny praiminisitra sy ny minisitra vitsivitsy izy, mbola nihemotra hatrany ny ora ka efa hisasaka ny alina vao indro nipoitra ihany izy ka nanao kabary somary lavalava. Toy izao ny fintina:
Niampy sivy vaovao ny isan'ny voa ka 12 ny isany amin'izao. Saika avy amin'ny sidina AF934 avokoa izy rehetra ireo.
Mijanona avokoa ny fitaterana rehetra na an-drenivohitra na ireo mandeha any amin'ny faritra hafa.
Mihidy avokoa ny fivarotana rehetra afa-tsy ireo mpivarotra entana ilaina andavanandro, misokatra ny tsenambarotra lehibe.
Misokatra eny anivon'ny fokontany (eny amin'ny EPP ny tena marina) ny tsenamora.
Alatsinainy 23 marsa 2020
Mbola nisy fiara fitaterana vitsivitsy nanohy ihany ny asany, voasakana ireny rehefa manomboka ho mazavabe ny andro. Lasa mandeha an-tongotra ny ankamaroan'ny olona tsy manana fiara na kodiaran-droa. Feno miaramila sy mpitandro ny filaminana ny lalana. Manontany izay alehan'ireo ao anatin'ny fiara. Tsy manontany na mitady kosa ny antonta-taratasin'ny fiara. Mbola betsaka ireo mamonjy tsena hividianana ireo izay mety ho tavela saingy maro no diso fanantenana: tsy nety nipoitra loatra intsony ny vary. Nikatona avokoa ny mpamongady tao Sabnam afa-tsy tokana irery ihany.
Mitaratra izay misy ny sakana ataon'ny mpitandro ny filaminana ny fiara iraisana sasany ka miasa any amin'ireo izay tsy misy izany. Ny aty amin'ny faritra misy anay moa dia vahoaka be no niandry teo ampitan'ny sampanan'i Lazaina ka hotaterina mankany avaratra any, tsy haiko hoe hatraiza fa ny diako kosa tsy maintsy miakandrefana. Nampahatsiahy ahy ny andron'ny 26 janoary 2009 ity toe-javatra ity satria miloloha entana avokoa ireo olona mandeha an-tongotra. Fa tsy fandrobana kosa no nataon'ny olona tamin'ity fa fividianan-javatra izay zaka kosa. Betsaka ireo kivy tamin'ny tsy fahitana vary teny amin'ny fivarotana satria tsy afa-nanangona toy ny mpanankarena.
Niteraka fitarainana maro fa tsy araka ny fampanajana ny fihibohana ny tsenamora satria tangorona tsy misy tahaka izany no taratra. Vao maika io hampihanaka vetivety ny aretina, hoy ny mpandinika. Niteraka fahatezerana ihany koa ny fahitana fa mbola afa-manao ny sidina mahazatra azy ny fiaramanidina nefa ny fitaterana an-tanety noraràna tanteraka. Nanontany tena ny olona hoe fa dia fanomezana tombondahiny sy fitsinjovana ny mpanankarena hatrany ve no atao?
Talata 24 marsa 2020
Tsy nisy intsony ny fiara fitaterana, tsy maintsy mandeha an-tongotra 12-15 kilaometatra izany ny olona aty aminay raha te-hiakatra any Antananarivo noho ny tsy fisian'ny fiara fitaterana. Noraran'ny mpanao sakana ny fandehanan'olona roa amin'ny kodiaran-droa iray. Voatery miandry toerana lavidavitra ireo nitondra olona niandry ny namany. Olona roa ihany kosa no azo ekena ho entin'ny fiaran'olon-tsotra iray.
Fiara tsy mataho-dalana roa an'ny Zandarimaria indray no lasa niandry teo amin'ny toeram-piantsonana vonjimaika an'ireo fiara fitaterana niasa an-tsokosoko voalazako ao amin'ny andron'ny Alatsinainy. Vao maika nihamafy ny sedra nahazo ny mpiantsena noho izany. Ny Mpamongady nisokatra dia mametra fatratra ny isan'ny entana amidiny amin'ny mpanjifany izay mpaninjara amin'ny ankapobeny, lasa toy ny mpividy tsotra ny mpivarotra mpaninjara fa tsy hoe mpaninjara. Somary reko tsipalotra fa toa efa najanona ny fitaterana an-habakabaka fa mbola mila fanamarinana aho. Raha mbola somary betsaka ny fivezivezen'ny olona ny alatsinainy hariva dia toa tsy hita intsony kosa izany fivezivezena izany ny talata hariva, nangina tanteraka ny tanàna. Azonao atao ny manampy na manitsy azafady.
2020-03-20 @ 21:41 in Ankapobeny
Daty tafiditra ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara indray ny 20 marsa 2020, (20 anankitelo). Izay manko vao nambara tamin'ny fomba ofisialy ny nahatafiditra ny Coronavirus teto Madagasikara ary vehivavy anankitelo mbola salama jerena no mitondra izany. Vehivavy 41 taona, vehivavy 19 taona ary vehivavy 45 taona. Toeram-piaingana iray na hoe mitovy fa lalana anankitelo no nidirany teto Madagasikara na dia samy avy amin'ny voromby avokoa aza izany. Ny voalohany niditra tamin'ny 17 marsa 2020 tamin'ny alalan'ny sidina Air France, oadray, nitovy daty tamin'ny nampiongana ilay rangahy iry! Ny faharoa niditra teto Madagasikara tamin'ny 18 marsa 2020, niainga tany Frantsa fa nandalo tao amin'ny nosy Maorisy, vao nentin'ny sidina Air Mauritius ho eto Madagasikara. Ary ny fahatelo kosa tamin'ny 19 marsa 2020 avy amin'ny sidina Air Madagascar... Raha araka ny nambaran'ny Filohan'i Madagasikara.
Voamarika avy amin'izany fa tamin'ity herinandro ity daholo ireo olona ireo no niditra an'i Madagasikara, izany hoe tao anatin'ny fotoana efa nisian'ny fanapahan-kevitra hanidy sisintany fa ny andro no nandrasana hoe tapitra ny andro alakamisy vao hohidiana ny fampidirana olona. Dia aza atao mahagaga raha voasoratra ny hoe efa tena notadiavina mihitsy ny nampidirana azy vao hohidiana ilay sisintany, dia izay no nahatonga ny lohateny hoe dia nampidirina toy ny soavalin'i Troie mihitsy izany vao nohidiana ny vavahady nefa efa miandry fotsiny ao anaty soavaly ny fahavalo ary handripaka ny mponina. Ho an'izay tsy mahazo ny resaka mihitsy dia fanazavana lavabe amin'ny tantara nosoratan'i Homère mitondra ny lohateny hoe "L'iliade et l'Odyssée" ny valiny azoko omena azy. Io tantara io koa no nahatonga ny anarana rindram-pisompatra malaza amin'ny solosaina hoe "trojan".
Efa folo andro talohan'izao indrindra anefa ilay rangahy voaongana iry no nilaza ny hanakatonana ny sisintany saingy ny valiny moa dia hoe manjary potika ny toekarena. Efa lava angamba izay soratra izay fa aleo aloha samy hitsakotsako daholo.
2020-03-18 @ 10:56 in Finoana
Sendra tsikaritro tao amin'ny fantsona HFF, mpanandratra ny Yahoshoa ary mpanameloka ny anarana ankoatra izany ka tafiditra amin'io ny anarana Jesosy, ny tranonkala fandinihana baiboly ahitana ny lahatsoratra ôrizinaly (hebreo) qbible.com. Efa ampolony taona maro no nitiavako mijery ireny lahatsoratra ôrizinaly misy ny fanononana azy sy ny dikany (amin'ny teny anglisy na indraindray teny frantsay) ireny. Faly tokoa aho nahita ilay izy. Ny fandinihana sy ny fanazavana ny dikan'ny teny amin'izay lahatsoratra hovoaboasina manko amiko no tena dikan'ny heviteny marina fa tsy zavatra hafa.
Any amin'ny fanazavan'io tranonkala nolazaiko io no mametraka fa raha "Yesous" no anarana avy amin'ny teny grika, ho an'ny testamenta vaovao, dia tokony izay araka ny fanononana izay no arahan'ny fitsipiky ny fandikanteny tsara dika amin'ny fiteny hafa fa tsy anarana avy amin'ny hebreo na arameana indray (Jasoa na Jesoa). Amin'izay fotoana izay dia ny FLM irery no manaja ny anarana (Jesosy) amin'ny mpikambana ao amin'ny FFKM. Dia manamarika ihany koa izany fa tsy izy mihitsy ny fifikiran'ny HFF amin'ny fanandratana ny anarana tian-dry zareo apetraka.
Resaka fandikana ny anarana fotsiny no resahako eto fa tsy misy idiran'ny fifanarahana sy ny teolojia.